Tarika Voankininina – Villa Barea Ambohimanga
Haneho ny talentany etsy amin’ny Villa Barea Ambohimanga ny tarika Voankininina. Hotanterahina ny asabotsy 31 oktobra 2020 ny “Tsimpon’Ambatra”, manomboka amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro izany. Mpihira manana ny maha izy azy avokoa ny mandrafitra ny tarika, ahitana an-dry Lilie, i Lily, i Zozo, i Goth, ary i Hary, hitendry ny Orgue Hammond. Hovetsoina ao ireo hira tamin’ny taona 50, ny 60, ny 70, ny 80, ary ireo hira diska “45 tours” taloha toy ny an-dry Naly, i Barijaona, i JJ Tseheno, i Julien Rasiman, i Jerome Randria, Ny Rahona, i Abel Andriamalala, ry Ramaroson Wilson, i Romule, sns
18,3 Njara M, Jacquis R – La Cabane
Mpihira efa tsy zovina amin’ny maro intsony ny hitondra ny “Mamiratra minday figo” etsy amin’ny La Cabane, anoloan’ny Alliance francaise Andavamamba, ahitana an-dry 18,3 sy i Njara Marcel ary i Jacquis Randria, ny sabotsy 31 oktobra ho avy izao. Manomboka amin’ny 6 ora hariva ny seho. Mpihira anisan’ny nanamarika ny fahazazan’ny tanora, ankehitriny ny 18,3.
Rak Roots – C-Class Nanisana
Mpanakanto manana ny lazany sy ny maha izy azy eo amin’ny tontolon’ny mozika malagasy i Rak Roots. “Faka vady”… Hira anisan’ny tsy afaka am-bavan’ny olona ankehitriny izany. Hanatanteraka hetsika etsy amin’ny C-Class Nanisana i Rak Roots, rahampitso asabotsy 31 oktobra, manomboka amin’ny 8 ora alina. Maro ny tsy ampoizina isan-karazany amin’io fotoana io, raha ny filazan’ny tompon’andraikitra.
Halefa eto an-tanindrazana, ny 6 novambra izao, etsy amin’ny Cinépax Tana Water Front, ilay sarimihetsika nampitondraina ny lohateny “Haingosoa”. Anisan’ny mampiavaka ity tantara ity ny nahazoany laharana sy vokatra tsara hatrany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny eto an-tanindrazana. Anisan’izany ny « Rhodes Island International Film Festival 2019 » (USA), ny « Harlem International Film Festival 2020 » (USA, Prix du meilleur film), ny « RFC » (Madagascar, présentation en avant-première en 2019), ny « Cinévoyageurs » (France), tany amin’ny « Festival Lumières d’Afrique » (Besançon, France), ny fandraisana anjara tamin’ny « Festival du cinéma Plein les oreilles » (Montmellian, France), ny « Africa’CIFF 2020 » (Guadeloupe, France).
Nangonin’i Narilala sy i HaRy Razafindrakoto